N'ike Mmụọ Nsọ | Ka 2022
Mkparịta ụka ya na onye na -eme ihe nkiri, onye na -eme ihe nkiri, na nwanyị Badass Idil Ibrahim
2022 | ẸNam Ekese Paul Adams | Atiya: N'ike Mmụọ Nsọ
Maka nkeji nke abụọ na usoro onyonyo anyị, Get Schooled, Project Girl zigara onye na -eme ihe nkiri Idil Ibrahim izute Jenifer, nwa agbọghọ si obodo nta dara ogbenye n'ime ime obodo Malawi onye nọrọla ọtụtụ afọ na -alụ ọgụ ka ọ nọrọ n'ụlọ akwụkwọ. Anyị jidere Idil n'izu gara aga ikwu maka njem ahụ.
Ihe mgbako ọhụụ na -egosi ego ole ị ga -eme ma ọ bụrụ na ị bụ nwoke
Eziokwu: Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị, enwere ezigbo ohere ị ga -eme ihe na -erughị ndị ọgbọ gị nwoke. Mana ọ bụ ezie na data ọhụrụ na -egosi na ụmụ nwanyị na nkezi ụlọ akụ naanị cents 77 maka dollar ọ bụla nwoke na -ebubata ụlọ (ọnụ ọgụgụ ha ka njọ maka ụmụ nwanyị nwere agba - a na -akwụ ụmụ nwanyị Afrịka America naanị 64 cents, na Latinas 56 cents kwa dollar, dịka ma e jiri ya tụnyere ndị ọcha, ndị na-abụghị ndị Hispanik), ọdịiche ụgwọ ahụ nwere ike ịdị iche-ma gbasaa-site na ọrụ. Ụnyaahụ, Oge wepụtara ngwa iji gosi gị ego ole. Ajụjụ ọhụrụ nke ọdịiche ụgwọ ụgwọ nke magazin ahụ na -ajụ naanị ajụjụ atọ - mmekọahụ gị, afọ gị, na ọrụ gị - iji chọpụta ma ọ bụrụ na ị ga -eme obere karịa otu nwoke nọ n'otu ubi. Dịka ọmụmaatụ, ngwa ọrụ na-egosi, onye na-ere ahịa mgbasa ozi dị afọ 27 na-eme ka pasent 23 dị ala karịa nke nwoke ya, ebe nwanyị dị afọ 32 ga-eme ka pasent 63 dị ala karịa nke nwoke ibe ya. Dịkwa ka onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ, nwanyị ga-eme ka pasent 38 dị ala karịa onye ọrụ ibe ya nwoke site na mgbe ọ kụrụ afọ 36. Iji wuo ngwa ọrụ ya, ndị ọrụ oge nyochara ụgwọ ọnwa nke ihe karịrị nde ndị America iri na ise nwetara n'ime afọ anọ. Na -arụ ọrụ n'ime ụdị ọrụ dị iche iche 460, ndị ọrụ hụrụ 1,490
Otu esi edozi ụgwọ mgbazinye nwa akwụkwọ gị
Ha bụ isi okwu nke mkpọsa 2016, yana nke ndụ gị: pasent 20 nke ụmụ nwanyị tozuru etozu na -ahapụ ụgwọ mahadum. N'ebe a, ụzọ ise iji kwụọ ya ụgwọ ngwa ngwa - na -echeghị ka DC mee ihe.
Ụzọ 5 iji gbasaa okwu gbasara ihe kpatara ị kwenyere n'ezie, site na Meredith Blake, Social Media Genius na ProSocial
Ị gụrụ akụkọ pụrụ iche nke Glamour, 'Ihe Nzuzo Ezinaụlọ m Nọgidere Afọ 100', ebe a sitere n'ike mmụọ nsọ ma ọ bụ na mbipụta anyị nke Ọgọst 2012? Ntughari ngwa ngwa: Ọ bụ maka ezinụlọ nke ụmụ nwanyị bụ ndị ọrụ nwoke na nwanyị ruo ọgbọ anọ, ruo mgbe otu nwanyị mechara mebie usoro ahụ. Ọ bụ ezie na ịzụ ahịa mmekọahụ yiri ka ọ dị anya site n'ụlọ, okwu a bụ ihe na -eme ebe a na US, na otu ihe kpatara nsogbu ahụ ji nwee mmụba dị otú a bụ site na nnukwu mkpọsa nke Meredith Blake nke ProSocial butere.
Nweta okwu Epic Pep sitere na ndị na -eme egwuregwu Olympic 25
Womenmụ nwanyị kachasị ike na -aga egwuregwu oge ọkọchị a na -enye okwu mkpali Glamor mini.
Mmụọ ozi ụwa
Azụmahịa Super Bowl ga -egosipụta akara ịdọ aka na ntị nke ime ihe ike n'ụlọ
N'ime mgbasa ozi ga -eme ka ị chịa ọchị na Clydesdales kpochapụwo anyị niile enweghị ike ichere ịhụ, a ga -enwe azụmahịa dị nro karịa na Super Bowl Sọnde - ọkwa ọkwa ọha nke abụọ nke 30 site na No More iji bulie mmata banyere ime ihe ike n'ụlọ. PSA na-egosi mkparịta ụka ozi ederede n'etiti ụmụ nwanyị abụọ-otu nọ na oriri Super Bowl, na ozi nke ọzọ na ọ nweghị ike ịbịa n'ihi na, ọ sịrị, 'Jake nọ n'otu n'ime ọnọdụ ya.' Mkparịta ụka ahụ na -aka njọ, a hapụkwara onye na -ekiri ya ka ọ kwụwa, n'amaghị ihe ga -eme ọzọ. Ihe nkiri ahụ ji ịdọ aka ná ntị mechie: 'Enwere ọtụtụ ihe ịrịba ama nke ime ihe ike n'ụlọ na mwakpo mmekọahụ.' 'Mgbasa ozi ọha a na -ejide ọtụtụ ndị na -eto eto - yana ọtụtụ ndị ọzọ - na -eji ozi ederede na -ekwurịta okwu yana otu esi ekwu obere ihe na -ekwu ọtụtụ ihe,' Ọ nweghị onye isi ọzọ Virginia Witt kwuru na nkwupụta akụkọ. 'Ịmụtakwu ihe nwere ike inye ndị mmadụ ohere inwe mkparịta ụka nwere ike ịchekwa ndụ wee ruo enyemaka. Anyị na -atụ anya na nke a ga -abụ otu nzọụkwụ ọzọ maka mgbanwe ọdịbendị anyị na -achọ maka ime ihe ike n'ụlọ na mwakpo mmekọahụ. Azụmaahịa a na -eme ka ndị na -ekiri mara na ha nwere ike ide ederede 'ỌZỌ' gaa na 94543 iji nweta ozi agụmakwụkwọ, gụnyere akara ngosi mmegbu na
Ụmụ nwanyị 8 nwere ọgụgụ isi na -agbanwe ụzọ ụwa si eche
Ụmụ nwanyị asatọ a na -agbanwe echiche ụwa. Taa, Wired kwupụtara ọkwa nke mbụ ya 'Ndepụta na-esote'- ndepụta dị mkpirikpi nke' 20 'ndị na-agụghị agụ' na-ebipụta na mbipụta nke May nke na-atụ aka 'na ụzọ ọhụrụ iche echiche banyere ụzọ iche echiche ọhụrụ,' dị ka EIC Scott Dadich si kwuo. . 'Ndepụta na -esote bụ nchịkọta ndị mmadụ si n'ofe azụmahịa azụmahịa na -agbanwe ụzọ anyị si ebi, ọrụ, egwu na echiche.' Womenmụ nwanyị asatọ nọ na ndepụta a bụ: Megan Smith, onye isi ndị ọrụ teknụzụ, gọọmentị US: 'Ndị otu ya na -adụ onye isi ala ọdụ na isi teknụzụ dị ka mgbanwe patent, okwu nzuzo, na nnọpụiche Net, yana mgbanwe nhazi nke ga -enye ndị ọchụnta ego aka. ezi echiche iji kwalite ha ngwa ngwa. ' Tracy Chou, onye injinia ngwanrọ, Pinterest: 'Afọ abụọ gara aga, o weere usoro dị mfe mana na-akpasu iwe nke bulite akwụkwọ mgbasa ozi-na usoro nkesa koodu Github, dị ka ọ dị-ụlọ ọrụ nwere ike iji mee ka ọha mata ọnụ ọgụgụ ndị injinia nọ n'ọkwá ha. . Ebumnuche: ịchọpụta oke nsogbu dị ka nzọụkwụ mbụ n'ịkwado mkpebi siri ike iji lebara ya anya. ' Cindy Holland, VP nke ọdịnaya mbụ, Netflix: 'Echere m na anyị na -enyocha elu n'echiche nke ihe
8 Okwu na -akpali akpali nke Instagram iji duru gị n'ime izu ụka
Ọ bụ ogologo izu oyi ebe a na Glamour-anyị kwagara n'ime ime obodo gaa n'ọfịs ọhụrụ anyị ebe a na One World Trade Center, ihu igwe wee nwee ezigbo oyi na mberede. Yabụ, ọ bụ TGIF, n'ezie! Kedu ka izu gị mere? Nke a bụ ahịrịokwu mkpali asatọ na-atọ m ụtọ nke m hụrụ na ntanetị Instagram m n'izu a. Kedu ụfọdụ okwu mkpali na -amasị gị nke na -amasị gị? Kekọrịta ha na ihe ndị dị n'okpuru! 'Ihe niile ga -adị mma n'ikpeazụ. Ọ bụrụ na ọ dịghị mma, ọ bụghị ọgwụgwụ. ' Ọ dị mma #filyra #paris Foto nke michelgaubert biputere ??? (@michelgaubert) na Nọvemba 11, 2014 na 3:27 pm PST 'Isi dị mma na ezi obi na -abụkarị ngwakọta dị egwu.' #motivation #motivational #motivationalquotes #quotes #quoteoftheday #inspired #inspiring #inspiration #minimotivations #mini_motivations #nelsonmandela #nelson #mandela Foto nke @mini_motivations debere na Disemba 12, 2014 na 10:10 am PST 'Agụ adịghị arahụ ụra n'ihi echiche atụrụ. ' #quotes #ụra #tiger #atụrụ #ndụ #haters #motto #inspiring Foto nke Okwu Matter (@thewordsmiths) biputere na Disemba 12, 2014 na 10:16 am PST 'Ihe niile ị chọburu dị n'akụkụ nke ọzọ nke ụjọ. . ' #QOTD Foto nke Anita Reyna biputere (@anitareyna27) na Dec 12, 2014 na 1:21 pm PST 'Nwanyị nke
Etu esi atụgharị Snapchats karịa otu ugboro
Ọ bụrụ na ọ dịla mgbe ịchọrọ na ị nwere ike megharịa Snapchat ihe karịrị otu ugboro, ọ dị mma, ị nọ n'udo. Na mmelite ewepụtara taa, Snapchat wepụtara nhọrọ ịkwụ ụgwọ maka mmegharị ọzọ. 'Taa, ndị Snapchatters US nwere ike zụta mmegharị ọzọ, malite na 3 maka $ 0.99,' ọkwa ọkwa ahụ kọwara. 'Ị nwere ike iji Nlagharị na ncha ọ bụla ị nwetara, mana ị nwere ike imegharị ncha ọ bụla naanị otu ugboro. Ha dị ntakịrị ọnụ - mana oge bụ ego! Ị ga -akwụ cents 33 iji megharịa Snapchat ọzọ? Gwa anyị na ihe ndị dị n'okpuru.
Otu ụlọ akwụkwọ pụrụ iche siri gbanwee ndụ nwata nwanyị a
Na nkeji nke atọ nke usoro vidiyo anyị, Get Schooled, Glamour's philanthropic initiative the Girl Project zigara onye na -eme ihe nkiri Elizabeth Lo gaa India izute Keerthi.
Ndị enyi 'Times' 11 kpọgidere echiche nke ọdịda dara karịa ihe ngosi ọ bụla na TV
Afọ iri na atọ ka ọ gwụsịrị, 'Enyi' ka na -ejisi ike na -akụzi echiche ọdịda site n'ime ka nsogbu nke agwa ahụ nwee mmekọrịta dị egwu.
Akụkọ dị mkpa gbasara ohere ịkwụ ụgwọ okike na ọdịnihu ụmụ nwanyị nọ n'ebe ọrụ
Anyị maara (makwa na ị ma) na enwere nnukwu nsogbu na ego ịkwụ ụgwọ ụmụ nwanyị na obodo a: nsogbu cents 23 nke nsogbu (ụmụ nwanyị ka na -eme cents 77 maka dollar ọ bụla ụmụ nwoke na -eme, na nkezi). Mana gịnị ka a na -eme maka ya? Na Wenezde, Onye isi ala Obama kpọrọ ndị isi ụmụ nwanyị sitere na Houselọ na Senate - ọkachasị, ndị isi lụrụ ọgụ ogologo oge maka ịha nhatanha - na nzukọ na White House ka ha kwuo maka ọdịiche ụgwọ ọnwa yana ihe enwere ike ime iji dozie ya. (Ọ dị egwu? Ee. Mana anyị ga -achọ ka ọ kpọọkwa ndị omebe iwu nwoke. Nke a abụghị naanị okwu ụmụ nwanyị.) Otu n'ime ndị bịaranụ, Tina Tchen, onye enyemaka Onye isi ala na onye isi oche nke White House Council na Women na Ụmụ agbọghọ (ọ bụkwa onye isi ndị ọrụ nye First Lady Michelle Obama), were obere oge soro Glamor kwurịta ihe mere n'azụ ọnụ ụzọ ndị ahụ dị oke mkpa. Onye isi ala Obama kwuru n'akụkụ ndị bịaranụ, gụnyere onye isi ụlọ Democratic, Nancy Pelosi. Glamour: Echiche onye ka ọ bụ ime nzukọ a? Tina Tchen: Okwu gbasara ezinaụlọ na -arụ ọrụ anọwo na atụmatụ onye isi ala site n'ụbọchị mbụ. Amaara m ya ọtụtụ afọ, ma ọ bụrụhaala na m maara ya, ndị a
Ndị dike obodo 50 nke Glamour
Ọ bụghị iwu na ị ga-abụ aha ihu nwere ihu iji nwee obi ike; ụmụ nwanyị nwere obi ike na -eme mgbanwe na obodo ebe niile. Iji kwanyere ha ugwu, Glamour na -amata otu nwanyị sitere na steeti ọ bụla dị ka dike obodo.
Ndụmọdụ 5 iji nyere gị aka imepụta akwụkwọ ozi ekele zuru oke mgbe a gbasịrị ajụjụ ọnụ
Ị maara na ị ga-eziga akwụkwọ ozi ekele mgbe a gbasịrị ajụjụ ọnụ, mana ị nwere ike ịmaghị ụzọ kachasị mma iji bulie ezi uche mgbe ịmechara echiche mbụ. Ọnụ ọgụgụ dị ịtụnanya nke ndị nwere ike were n'ọrụ na-atụ anya ịnata ekele gị site na ozi ozi ochie ochie. Alexis Monson, onye nchoputa Punkpost, ngwa na-enyere gị aka izipu kaadị ahaziri nke ọma, 'Ndị ọrụ na ndị na-ahụ maka ọrụ na-ekwu mgbe niile na ha na-atụ anya ndetu ekele ejiri aka dee-opekata mpe mgbe a bịara ajụjụ ọnụ. Mana ọ bụrụ na ịdebeghị ihe ọ bụla belụsọ email na afọ, ị nwere ike ịmaghị ebe ị ga -amalite. Atụla egwu. Ị nwere ike iji obi ike tinye mkpịsị akwụkwọ-ma mee ka akwụkwọ ozi ekele gị wee pụọ iche n'etiti igwe mmadụ-yana ndụmọdụ ndị ọkachamara a. 1. Mee njikọ onwe gị. Izipụ akwụkwọ ozi ekele bụ ihe kwesịrị ime — ma ị nwetara ọrụ ahụ ma ọ bụ na i nwetaghị. Monson na -ekwu, 'Igosi ekele na mmasị n'ịmepụta njikọ nke onwe a na -aga ogologo oge, yabụ ziga akwụkwọ ozi ejiri aka dee ọ bụrụgodi na ị nwetaghị ọrụ.' Site n'ekele ekele gị dị ọhụrụ n'uche ya, Monson rụtụrụ aka, ị nwere ike bụrụ nkwụsị mbụ onye njikwa ọrụ mgbe ọkwa ọhụrụ mepere. 2. Splurge maka kaadị pụrụ iche. 'Ogo kaadị gị
Chere, Ebee ka ego na -aga? 4 Ihe na -emebi mmefu ego gị
Nke a bụ onye na-emepe anya site na onye ndụmọdụ ịgụ ego gbasara ego Clare Levison, CA: 'A hụrụ m ọtụtụ ụmụ agbọghọ mara mma, na-eme nke ọma na-eme otu mmejọ ego na-eche na ọ ga-arụ ọrụ ego.' Eziokwu bụ na omume ọjọọ ndị ahụ na-efu anyị nnukwu ihe-n'otu nyocha emere n'oge na-adịbeghị anya, pasent 60 nke ụmụ nwanyị kwetara na ha na-ebu ego kaadị kredit. Anyị nwere ike ime nke ọma, ụmụ nwanyị! Maka ndị mbido, kpachara anya maka ọnyà ndị a na-adịkarị.
Ihe 6 ị ga -amata gbasara Candy Crowley, gụnyere ihe kpatara o ji na -akpata nnukwu esemokwu tupu arụmụka onye isi ala nke abalị a.
Arụmụka onye isi ala nke abụọ na -eme n'ihe na -erughị awa anọ, agaghịkwa m agwa gị na enwere ọtụtụ ịnyịnya na ya. Mana nke ahụ bụ naanị akụkụ akụkọ a nọ n'isi akụkọ. Nke ọzọ? Candy Crowley, onye na-ahazi arụmụka n'abalị a-nwanyị mbụ họpụtara maka ọrụ ahụ n'ime afọ 20.
Facebook na -ebupute TechPrep: Ogige akụrụngwa iji gbaa ụdị dị iche iche na teknụzụ ume
A kọwaghị ụmụ nwanyị nke ọma na ọrụ teknụzụ, nyocha ọhụrụ sitere na McKinsey Global Institute na Facebook na -egosi na ndị Africa America na ndị Hispanik dịkwa. Nchọpụta ahụ chọpụtara na ebe pasent 50 nke ndị Afrịka America na pasent 42 nke ndị Hispanik - ma e jiri ya tụnyere naanị pasent 35 nke ndị Caucasian - chere na ha ga -adị mma na iji kọmputa arụ ọrụ, otu nwoke na nwanyị ahụ anaghị enwekarị ngwaọrụ ma ọ bụ ohere ịnweta. na teknụzụ. '' Ịmụta koodu na -emepe ohere dị ịtụnanya na ụlọ ọrụ na -adịwanye mkpa, '' onye isi ọrụ Facebook Sheryl Sandberg dere na nkwupụta. 'Ma nyocha gosiri… ọtụtụ ụmụnwanyị na ndị nwere agba na -eche na teknụzụ anaghị emepere ha.' Yabụ taa, Facebook ewepụtala TechPrep, ebe akụ ebe ndị pere mpe nwere ike ịmụta gbasara sayensị kọmputa na mmemme, wee chọta ngwaọrụ iji malite. N'ịbụ nke dabere na onye ị bụ na ihe ịchọrọ, saịtị ahụ na-enye-n'asụsụ Bekee na Spanish-egwuregwu, akwụkwọ, ohere mmadụ na ihe omume obodo maka afọ na ọkwa nka dị iche iche. Ebumnuche ya bụ maka ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa yana nne na nna ha na ndị na -elekọta ha, ndị Facebook kwuru, nwere ike bụrụ ihe nlereanya maka ọgbọ na -eto eto. Maka ndị ahụ na-etinye aka na teknụzụ, Facebook chọrọ
Zute bọtịnụ mmeghachi omume Facebook ọhụrụ: Ịhụnanya, Haha, Yay, Chaị, mwute, na iwe
Ụnyaahụ, Facebook malitere ịpịgharị bọtịnụ 'mmeghachi omume' ya-ihe mgbasa ozi mgbasa ozi na-eme mkpọtụ nke ukwuu maka bọtịnụ ndị na-abụghị. Ime mpụta mbụ ha na Ireland na Spain, nhọrọ Ịhụnanya, Haha, Yay, Wow, Sad, na Angry emoji-ish na-enye ndị ọrụ ikike ịzaghachi akụkọ dị ka mfu, ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ụmụ nkịta n'ụdị mmetụta dị iche iche-karịa ụdị Facebook. ịmeela. 'Ebumnuche anyị bụ igosi gị akụkọ kachasị gị mkpa na Feed News,' nke a na-ekwupụta na Facebook na blọgụ ya. 'Na mbido, dị ka anyị na -eme mgbe mmadụ nwere mmasị na post, ọ bụrụ na mmadụ na -eji mmeghachi omume, anyị ga -achọpụta na ha chọrọ ịhụ karịa ụdị post a. Anyị ga -etinye oge n'ịmụ ihe site na mwepụta mbụ a wee kwughachi ya dabere na nchọpụtara n'ọdịnihu. ' Buru ụzọ lee Spain na bọtịnụ Facebook ọhụrụ Ireland ebe a: Foto nke CNN en Espa ?? ol (@cnnee) biputere na Ọkt 8, 2015 na 8:47 am PDT Foto CNNMoney (@cnnmoney) biputere na Ọkt 8 , 2015 at 11:18 am PDT Foto nke Infobae America (@infobaeamerica) biputere na Ọkt 8, 2015 na 8:29 am PDT Kedu mmeghachi omume Facebook ị chere ga -abụ nke kacha eji?
Okwu Yogi Berra nke 10 Anyị ga -eji ya kpọrọ ihe ruo mgbe ebighị ebi
Yogi Berra - nke a na -ewere dị ka otu n'ime ndị kacha jidere na akụkọ egwuregwu baseball - nwụrụ na Tuesday mgbe ọ dị afọ 90. Berra nwere ọtụtụ ihe ịga nke ọma n'ọhịa dị ka onye na -egwu egwuregwu, onye nchịkwa, na onye njikwa, mana a hụkwara ya n'anya, ọbụlagodi site na oke iwe nke ndị na -egwu baseball, maka okwu mkparị ya na okwu mkparị. N'ezie, okwu amamịghe ya abịala ịkọwa ya dịka nnukwu ọrụ ya - nke bụ n'ezie (gbaghara pun) ikwu ihe. Dị ka akwụkwọ akụkọ New York Times si kwuo, Berra nwere amamihe maka okwu amamịghe na ihe ijuanya na-esighi ike. Site na Times: 'Na 1949, na mmalite ọrụ Berra Yankee, onye njikwa ya nyochara ya otu a na N'ajụjụ ọnụ na Sporting News:' Mr. Berra, 'Casey Stengel kwuru,' bụ ezigbo mmadụ ibe ya nwere ikike pụrụ iche. '' Ee, n'ezie. Ugbu a, n'ememe ndụ Berra na echiche dị mma, mana lee 10 n'ime Yogisms kacha amasị anyị: Foto nke Ekepụtara (@takehislight) biputere na Sep 23, 2015 na 7:58 am PDT Foto etinyere. site @donnyepp na Sep 23, 2015 na 7:37 am PDT Foto nke cleveland.com (@clevelanddotcom) biputere na Sep 23, 2015 na 7:29 am PDT Foto nke Thomas (@tbgroom22) biputere na Sep 23, 2015 na 7 : 17am ​​PDT
kedu ihe nwere ike ime ka ntutu gị too
ekike nwere akwa ojii adọwara adọwa
N'ala ala akwa bikini